Faafaahin..Wariye Cabdi Casiis Afrika Oo U Geeriyooday Dhaawac | Xaqiiqonews
Faafaahin..Wariye Cabdi Casiis Afrika Oo U Geeriyooday Dhaawac
Wariyaha caanka ah Cabdi Casiis Afrika oo sidoo kale ahaa agaasimaha raadiyaha afka dowladda ku hadla ee “radio Muqdisho” ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax gaarigiisa loogu xiray.
XAQIIQO NEWS- WARARKA GUDAHA
Qaraxa oo u muuqday in uu ahaa mida gaarigiisa looga xiray ayaa gelinkii dambe ee sabtiga ka dhacay Muqdisho, qaraxa ayaa sababay dhaawac halis ah oo wariyaha gaaray, taasi oo ugu dambeyn keentay in uu u dhinto.
Dhanka kale qaraxa ayaa sababay dhaawac soo gaaray agaasimaha Telefishinka qaranka Sharmarke Warsame iyo darawalka waday gaariga qaraxa lagu xiray.
Cabdi Casiis Afrika waxa uu ka soo shaqeeyey idaacaddii codka caasimadda “Capital Voice” oo ku burburtay dagaaladii Xamar ee u dhaxeeyey Al-shabaab iyo Dowladda ka dib markii qalabka idaacadda ay habeen madow furteen ururka Al-shabaab ,Afrika ayaa wixii intaasi ka dambeeyey u wareegsaday idaacadda Radio Muqdisho halkaasi oo uu caan ku noqday tabinta barnaamijyada la xariira dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab.
Sanadkii 2011 Cabdi Casiis Afrika ayaa ku dhaawcmay qarax Al-shabaab ay ka dambeeyeen xilli abaandulihii hore ee ciidanka dowladda Janaraal Dhaga badan uu shir jaraa’id u qabtay koox wariyaal ka dib markii dowladda ay horumar ka sameysay dagaalkii Dayniile.
Sanadkii 2016 Afrika ayaa dhaawac ka soo gaaray iska hor imaad ciidamo dowladda ka wada tirsan ku dhaxmaray Muqdisho.
Cabdi casiis Afrika ayaa muddooyinkii u dambeeyey ahaa agaasimaha Raadiyo Muqdisho, isaga oo sidoo kale ahaa sarkaal ka tirsan NISA.